Nin hindi ah oo magaciisa u badalay "Qoomamo" - BBC News Somali
Nin hindi ah oo magaciisa u badalay "Qoomamo"
Lahaanshaha sawirka Asif Saud
Image caption Boor uu magaciisa cusub ku qoray oo ku dheggan albaabkiisa
Waalidkiisa waxay u bixiyeen Sathyanarayana Iyer. Balse wuxuu u bedelay Qoomamo (Regret) Iyer. Weriyaha BBC-da Geeta Pandey ayaa kula kulmay magaalada Bangalore ee Koonfurta Hindiya si uu wax uga weydiiyo in weligii uu ka qoomameeyay go'aankiisa.
Mr Iyer wuu wejiyo badan yahay - wuxuu isku tilmaamaa qoraa, daabece, sawirqaade, saxafi, farshaxaniste iyo waxyaabo kale oo badan.
Weriyaha ayaa horraantii bishan la kulmay 67-sano jirka, wuxuuna u sheegay in yaraantiisii uu jeclaa in uu noqdo weriye, waana taasi arrinta ugu dambeyn ku qasabtay in uu magaciisa badalo.
Xilligii uu jaamacadda dhiganayay, dhammaadkii 1970-maadkii, wuxuu qoray warbixin uu su'aal markasta taagan ku weydiiyay dhallinyaro badan oo ah "Kumaan ahay?"
Waxaa lagu daabacay wargeyskii jaamacadda, waxayna taasi ahayd dhiiragelintii uu u baahnaa ee ah in uu weriye noqon karo.
Xilligaasi ka dib wuxuu billaabay in uu warqado u qoro tafatirayaasha kuwaas oo qaar ka mid ah la daabacay. Warqadahaasi waxay xilligan casriga ah noqon lahaayeen kuwo internetka la geliyo.
Hindiya oo yaanyada 'hub' lagu waardiyeynayo
Sheekadan jacaylka een caadiga ahayn maxaa hawada Hindiya looga saaray
Wuxuu noqday qof hammi sare leh, wuxuuna warbixin u diray wargeyska Janavani oo ah mid taariikhda ka hadlo oo ka soo baxa magaalada Bijapur.
Maalmo ka dib, wuxuu helay "warqad qoomamo". Waxay ku billaabaneysay tafatiraha oo uga mahadcelinaya sida uu u daneynayo wargeyska, balse qeexaya sida uu uga xun yahay in aysan warbixintiisa daabici karin.
"Waan niyad jabay laakiin kalsoonideyda ma burburin," ayuu yiri.
Image caption Mr Iyer wuu wejiyo badan yahay - wuxuu isku tilmaamaa qoraa, daabece, sawirqaade, saxafi, farshaxaniste iyo waxyaabo kale oo badan.
Image caption Waxaa la soo gaarsiiyay boqollaal warqado qoomamo oo uga yimi wargeysyo kala duwan
Wuxuu muddo sannado ah waday in uu diro warqado, warbixinno, farshaxan, sawirro iyo gabayo oo uu u diray wargeysyada ku qoran Ingiriiska ama luqadda Kannada.
Wuxuu wax ka qoray macbadyada, goobaha dalxiiska iyo wararka caadiga ah. Inta badan wuxuu muujinayay xanaaqa shacabka, adeeg xumada basaska iyo qashinka.
Saxafi sare oo gobolka ka soo jeedo, sidoo kale ninkan la shaqeeyay 1970-maadkii illaa 1980-maadkii wuxuu sheegay "wuxuu hayay arrimaha ay ku qarwaan tafatirayaasha oo aysan jecleyn".
Inta badan wixii uu qoray waala diiday, sannado yar gudahood wuxuu uruuriyay 375 warqadood oo ah kuwa loogu sheegayay in aan wararkiisa la daabici karin, wuxuuna ka helay warbaahin kala duwan. Qoomamada "kamaysan imaan Hindiya oo keli ah, balse warbaahin caalami ah xittaa way u direen".
"Waxaa i harqiyay warqado shalayto iyo qoomamo ah," ayuu yiri. "Fikrad kama haysto sababta warbixinadeyda loo diiday. Waxaan billaabay in aan ka fikiro, maxaa iga maqan aniga? Balse maysan jirin meel ay tafatirayaasha isugu deyeen waxa ka qaldan warbixinnada qoraaga ama sawirrada uu soo diray."
Wuxuu ahaa qoraal "aan wanaagsaneyn", ayuu yiri saxafi Nagesh Hegde kaas oo ah ninka bixiyay magaca cusub ee Mr Iyer.
"Wuxuu ahaa ugaarsade wanaagsan oo ku xeel dheer uruurinta wararka. Wuxuu xirfad u leeyahay garashada wararka, balse ma awoodo in uu u qoro hab wanaagsan, wuxuuna u qoraa si aan fiicneyn," ayuu yiri Hegde oo BBC-da la hadlay.
Image caption Mr Iyer wuxuu il gaar ah ku hayaan sawirrada aan caadiga ahan - waana kuwan qaar ka mid ah
Mr Hegde, wuxuu qeyb caan ah ku lahaa wargeyska Prajvani, Majalladaas oo si joogto ah u diidi jirtay wararka Mr Iyer.
"Mararka qaar waxaan daabici jiray qeyb ka mid ah warkiisa si aan muddo uga nasto," ayuu yiri.
Hadaba, maalin ka mid ah sanadkii 1980-kii, Mr Iyer wuxuu booqday xafiiska wargeyska Prajvani, wuxuuna Hegde u sheegay in uu hayo warqadaha qoomamada ee loo diray.
"Waxaan weydiiyay cadeyn. Maalintii xigtay wuxuu imaaday isagoo sida boqollaal warqado ah oo loogu sheegay in wararkiisa aan la qaadan karin."
Image caption Xaaska Mr Iyer oo lagu magacaabo Vijayalakshmi waxay magaceeda labaad ka dhigtay midka cusub ee Qoomamo.
Ka dib Mr Hegde wuxuu qoray warbixin uu ugu magacdaray "Qoomamo Iyer".
"Qofkasta wuu isku naxaa, wuuna qariyaa warqadah noocan ah, balse isaga si farxad leh ayuu u soo bandhigay," ayuu yiri.
Wuxuu ahaa qof rajo wanaagsan, Mr Iyer wuxuu garanayaa sida dhibaatada uu ugu badalo faa'iidadiisa ugu wayn. Guuldaradiisa ayuu ku xoojiyay guushiisa.
"Tafatirayaasha waxay ii bixiyeen magacyo kala duwan, ugu dambeyna waxay iigu yeereen Qoomamo Iyer," ayuu yiri Mr Iyer. Wuxuu intaa ku daray, ka dib markii magaciisa uu badalay "in uu gartay in qalinka uu ka awood badan yahay seefta."
Ka dib wuxuu aaday maxkamad rayid ah wuxuuna si rasmi ah u badalay magaciisii ahaa Sathyanarayana Iyer.
"Waxaa badalay magaca iigu qoran baasaboorka, midka bangiga iyo warqadda casuumaadda ee arooskeyga. Waxaan adeegsaday magaceyga cusub."
Ugu dambeyntii wuxuu gaaray guul. Warbixinnadiisa waxaa qaato wargeysyo badan. Waxaa la aqbalaa warqadaha uu diro.
Maxkamadda Hindiya oo mamnuucday furriinka saddexda dalqadood ah
Maxaa “loo garaacay" ragga Hindiya ee Shaaribka la baxay?
Hindiya oo ganaaxi doonta diyaaraddii hawada saxaro ka soo daadisa
"Waxaan sitaa kaamero, qalin, koofi, maato iyo shaar ay ku dhegan tahay calaamadda Qoomamo (regret) Iyer", ayuu yiri.
"Wuxuu sawirraa Tuugsadayaasha beenta sheega, geedaha dumay, tacadiyada booliska, biyo la'aanta iyo qashinka jidadka daadsan."
Maadaama diiwaan dheer oo warqado guuldarro uu haysto, Mr Iyer wuxuu sheegay in weligii aysan niyad jebin warqadahaasi, sababtoo ah wuxuu xiriir dheer la lahaa diidmada.
BBC-da ayaa weydiisay in weligii uu ka qoomameeyay in uu magaciisa badalo?
"Maya," ayuu yiri isla markiiba.
"Waxaa la gaari doonaa maalin aan imaan doono anigoo aan wadan warqad diidmo. xilligan casriga ah, dad badan ayaa i weydiiyo waxa ay tahay warqadda qoomamo? balse maalin ayey demi doonaan kumbuyuutarada caalamka oo dhan, laakiin qaanadeyda ay ka buuxaan warqadahaasi diidmada way sii jiridoontaa."
Taj Mahal oo laga masaxay diiwaanka dalxiiska Hindiya
4 Oktoobar 2017
Nin Shiinaha u dhashay oo 50 sano Hindiya ku xayirnaa oo hadda la fasaxay
Furiinka degdega ah oo Hindiya xukun xarig ah lagu muteysan doono
3 Disembar 2017
Shineemooyinka Hindiya oo lagu amaray inay shidaan heesta calanka
30 Nofembar 2016